सिन्धुपाल्चोकमा भएको बस दुर्घटनामा १४ को नि ध न, दुर्घटना कसरि भयो घाइतेले सुनाए डरलाग्दो त्यो छण ! – ईमेची डटकम
सिन्धुपाल्चोकमा भएको बस दुर्घटनामा १४ को नि ध न, दुर्घटना कसरि भयो घाइतेले सुनाए डरलाग्दो त्यो छण !
Posted byइमेची संवाददाता October 11, 2019 October 23, 2019 Leaveacomment on सिन्धुपाल्चोकमा भएको बस दुर्घटनामा १४ को नि ध न, दुर्घटना कसरि भयो घाइतेले सुनाए डरलाग्दो त्यो छण !
इन्द्रावती गाउँपालिका–१० मा आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा नि ध न हुनेको सङ्ख्या १४ पुगेको छ । भोटसिपाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको हेलम्बु यातायातको बा२ख २७१५ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो । सात जनाको घटनास्थलमै नि ध न भएको हो भने अन्य सात जनाको उपचारका लागि अस्पताल लाने क्रममा र धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा नि ध न भएको हो । उपचारका लागि धुलिखेल अस्पतालमा ल्याइएका अन्य ५२ जनामध्ये पाँच जनाको नि ध न भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० भोटसिपास्थित बडहरे चोकमा गाडी दुर्घटना भएको हो । इन्द्रावती गाउँपालिका–९ सिपाटारबाट काठमाडौँका लागि छुटेको हेलम्बु यातायातको बा २ ख २७१५ नम्बरको बस सडकबाट २०० मिटर तल खस्दा कम्तीमा सात जनाको घटनास्थलमै नि ध न भएको प्रहरीले जनाएको छ । पचास बढी घाइते रहेको स्थानीयवासी राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
दुर्घटना भएको बसले यात्रुलाई अझै थिचिरहेकाले नि ध न हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने आचार्यले बताउनुभयो । स्काभेटर ल्याएर उद्धार गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि लगिएको नेकपा सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष झम्क नेपालले जानकारी दिनुभयो । छतमा समेत यात्रु भएकाले कम्तीमा पनि ७० बढी यात्रु बसमा रहेको नेपालले जानकारी दिनुभयो । हेलम्बु यातयातको सो बस कच्ची सडक र यात्रु बढी भएकाले दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टर घटनास्थलमा पुगेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार घाइतेमध्ये धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालमा ६७ जना र शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा १६ जना गरी ८३ जनाको उपचार भइरहेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा उपचारपश्चात् थप उपचारका लागि एक बालकलाई काठमाडौँस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा ‘रिफर’ गरिएको गिरीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपचारका लागि ल्याउने क्रममा नि ध न भएका जुनादेवी लम्साल, गणेश तामाङ, सुमित पुर्कोटी, सुवास अधिकारी र मीना मगरको शव धुलिखेल अस्पतालमा रहेको छ ।
Posted byइमेची संवाददाता October 11, 2019 October 23, 2019 Posted inब्यानर न्यूज
प्रहरीले आजदेखि यी रुटमा निःशुल्क बस चलाउँदै
सिन्धुपाल्चोकमा दुर्घटनामा परेर १४ जनाले ज्यान गुमाएको बेला काभ्रेमा अर्को दुर्घटना